DAAWO VIDEO:Fanaan Cawaale Adan”Ninka Hargeysa idiidey Jabuuti Ma Imaan Karo,Ninkasta Magaaladisa” – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Fanaan Cawaale Adan”Ninka Hargeysa idiidey Jabuuti Ma Imaan Karo,Ninkasta Magaaladisa”
DAAWO VIDEO:Fanaan Cawaale Adan”Ninka Hargeysa idiidey Jabuuti Ma Imaan Karo,Ninkasta Magaaladisa”
July 20, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 1
Waxaan akhriyey qoraalkii cawaale intanaan kusoo koobayaa jawaabtiisa
Horta Qofku wuxu riyoodaa markuu seexdo
Bal kawaran Hadaad adoo soo jeeda Riyooto maxaad hurdada la gaadhi?
Hadii Hargaysa lay diido jabuuti fanaan iman maayo!
Ma ogtahay inuu fanka soomaaliyeed bahdil ka ugu wayn uu kala kulmo jabuuti?
Mala socotaa inay yartahay qof jabuuti tagay oo isagoo fasaxsan soo noqday?
Ma Xasuusan tahay taariikhdi AHUN Saado cali iyo jabuuti iyadoo mikirifoonka Haysata Marwo khadra xayd tidhi yaa uyeedhay? Ha baxdo arooskii 30 ka qof laysu dhisi jiray jabuuti! AHUN Sahra Axmed iyo Khadra daahir iyo dadkii xiligaa taagnaa ay ka maslaxeen!
Masaafuriskii saado maxaad kala socotay?
Kuwa udhashay ee firxadka ku maqan oo aad ka mid ahayd ka hor intaan faranku kula hadal!
Xaalada Xasan Aadan maxaad kala socotaa? Aqalbaa beri la dejiyey maaha xaalkuye!
Ma ogtahay inaan jabuuti joogay 2010 festival kii afrika xaalada badan oo nagu qabsaday aniga Cujeeri, ikran araleh , Axmed biif, Ina saleebaan gaas ay halkaa ka dhaceen!
Horta qofka jabuuti loo diido in loo hiiliyaan aaminsanay
Adiguna Hadalka aad tidhi raali gelintiisu muhiim maaha ee anagaaba ku cafinee nagadaa gujada inader
Awale welcome to Hargaysa
Hadaanaan wax cafiyin 1988 maanaan ilawneen
Qaladaad Ka Dhaca Ragga Inta Lagu Jiro Haasawaha/Shukaansi Ee Ninyahoow Iska Ilaali
Cawaale nin waxgaradan miodaye sidii dhoocilaha ayuu u hadlay
Sidaasoy tahay welcome to hargeysa
soo dhawayntina waa kuu diyaar